Fiteny korda - Wikipedia
Ny fiteny korda na fiteny kiorda na fiteny kordisy dia fiteny ao amin'ny fianakaviana indô-eorôpeana, ao amin'ny sampana indô-iraniana, ao amin'ny zana-tsampana iraniana, ao amin'ny sampana misy ireo fiteny iraniana andrefana. Ny vahoaka korda izay miisa 44.000.000 any ho any sady monina amin'ny faritra midadasik'i Kordistàna, izay voazara amin'i Torkia sy i Iràna sy i Iràka ary i Siria, no tena miteny azy. Ahitana vahoaka korda koa ny any Eorôpa sy ny Etazonia sy ny any Kanada ary ny any Aostralia.
Zazavavy korda manao fitafiana netim-paharazana
I Kordiastàna, faritra misy mponina
Soratana amin'ny vondron-tarehin-tsoratra telo karazana ny fiteny korda amin'izao, dia ny tarehin-tsoratra latina (ao amin'ireo Korda any Torkia sy Siria), ny tarehin-tsoratra sirilika (ao amin'ireo Korda any amin'ny tanin'ny Firaisana Sôvietika taloha) ary ny tarehin-tsoratra arabo (amin'ireo Korda ao Iràka sy Iràna).
Fiteny iraniana sasantsasany: fiteny zazaky - fiteny ôsetiana - fiteny lôry - fiteny korda - fiteny farsy - fiteny dary - fiteny tajiky - fiteny pastô - fiteny balotsy - fiteny gilaky - fiteny talisy - fiteny mazandarany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_korda&oldid=997280"
Dernière modification le 21 Septambra 2020, à 12:26
Voaova farany tamin'ny 21 Septambra 2020 amin'ny 12:26 ity pejy ity.